မြန်မာလက်ကွက် မကျွမ်းကျင်သေးသောသူများအတွက်ပါ။ ဒါပေ့မယ့် ဒီလိုဆော့ဝဲလေးတွေကို အင်တာနက် မသုံးတဲ့သူ တွေ အတွက်ပိုကောင်း တယ်လို့ထင်တယ်။ ကွန်ပျုတာနဲ့ စတင်ထိတွေ့မယ့် လူတွေအတွက်အသုံးဝင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်စသင်တုန်းက လည်း ဒီလို Typing လေးတွေနဲ့ ပဲသင်ခဲ့ရတယ်။ မြန်မာဖောင့်တော့ မဟုတ်ဘူးပေါ့။ ကဲလေကြောရှည်နေမိပြီ။ အသုံးလိုမည့်သူများ အောက် မှာ ဒေါင်းယူလိုက်ပါ။
စာရေးသူ - ကြေးစားလေး at 1:31 PM No comments:
ကျနော့်ဆိုဒ်လေးကို Android မှာ ကြည့်နိုင်ပါပြီ.
ကျနော့်ဆိုဒ်လေးကို Android ဖုန်းပေါ်ကနေ ကြည့်ချင်တဲ့လူတွေ အတွက် Android app လေး လုပ်ပြီး တင်ပေးလိုက်ပါပြီခင်ဗျာ..။ ကိုယ့်ဖုန်းမှာသွင်းထားပြီး ဖုန်းအင်တာနက် ဖွင့်ပြီး ကိုယ်ကြည့် ချင်တဲ့ အချိန် ကြည့်လို့ ရပါပြီ.။ ပြန်ဖျက်ချင်ရင်လဲ တခြား App တွေလိုပဲ ပြန်ဖျက်လို့ ရပါတယ်ခင်ဗျာ..။ လိုချင်ရင် အောက်မှာ ဒေါင်းယူလိုက်ပါခင်ဗျာ.။ ဒီအတိုင်းဒေါင်းဖို့ လင့်ကော QR Code နဲ့ ပါ တင်ပေး ထားပါတယ်ခင်ဗျာ.။
Download from Ziddu >>
Download from 4shared >>
စာရေးသူ - ကြေးစားလေး at 1:23 PM No comments:
iTune Error 1602 ဖြေရှင်းရန်
Apple ကတရားဝင် ပြောထားတဲ့ရှင်းပုံရှင်းနည်းက တော့ iTune နှင့် တစ်ကွ Apple mobile Devices တွေကို Support လုပ်ပေးနေတဲ့ Programs တွေကို မိမိစက်ထဲကနေပြီးတော့ UNINSTALL လုပ်ပြီး မှ iTune Latest Version ကို Install ပြန်လုပ်ပါလို့ဆိုထားပါတယ်...
စာရေးသူ - ကြေးစားလေး at 6:09 PM No comments:
စာရေးသူ - ကြေးစားလေး at 6:08 PM No comments:
Installous ipa Error အတွက် ဆေးမြီးတို
Installous အသုံးပြုပြီး cracked App တွေကို iPhone ကတိုက်ရိုက် ဆွဲနေကြတဲ့ မိတ်ဆွေတွေဆီက အခုတစ်လောမှာ ဆက်တိုက် ဆိုသလို တွေ့ ကြုံနေကြရတဲ့ ပြဿနာကတော့ Download Link တွေကျမလာပဲ "Permission Deny" ဆိုပြီး ပေါ်လာတတ်တာပါပဲ... ဒီအခါမှာ ဘာ App ကိုမှ Download လုပ်လို့မရတော့ဘူးပေါ့ဗျာ..
ဒီပြဿနာက Installous သုံးနေကြတဲ့ သူအားလုံး တစ်ကြိမ်မှာမဟုတ် တစ်ကြိမ်မှာ လောလောဆယ် ရင်ဆိုင်နေကြရမှာပါ technical problem လား..? ဘာလဲ..? ဆိုတာတော့ မပြောနိုင်သေးပါဘူး...
ဥပမာအနေနဲ့ဆေးလောက ရူ့ ဒေါင့်က ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ Installous နှာစီး ချောင်းဆိုး ဖြစ်တာလောက်ပါပဲ၊ ဗေဒင်လောက အနေနဲ့ ဆိုရင်တော့ Installous က အညံ့ထဲမှာ ရောက်နေတာပေါ့။ ဘာကြောင့် ဒီလိုဥပမာ ပေးရတာလဲဆိုရင် နှာဆီး ချောင်းဆိုး ဆိုတာ ဆေးသောက်လိုက်ရင် ပျောက်တာပါပဲ ဒါပေမယ့် ဖြစ်ချင်ရင်လဲ ပြန်ဖြစ် တာပါပဲ ဒီလိုပဲ ဗေဒင်အရ အညံ့တွေ ဖြစ်နေပြီဆိုရင်လဲ ယတြာချေကြတယ် မဟုတ်လား...
ဆိုလိုချင်တာကတော့ တစ်ခါ ဆေးသောက်ရုံ ယတြာချေရုံနဲ့ တော့ တစ်သက်လုံး မကောင်းနိုင်ဘူး လို့ပြောချင်တာပါ။
ဒီလိုဆိုတော့လဲ ပြန်ဖြစ်လာရင် ဆေးသောက်လိုက် ယတြာချေလိုက် ပြန်လုပ်ကြတာပေါ့ဗျာ..
ကျွန်တော့်ကို ဗိန္တောဆရာလို့ ပဲ ပြောပြော ဘိုးတော်လို့ ပဲ ခေါ်ခေါ် "Installous ipa Error" အတွက် ဆေးမြီတိုလေး ယတြာလေးတော့ ပေးလိုက်ပါ့မယ်ဗျာ...
Installous ဆေးမြီးတို (သို့ ) ယတြာ
** Installous ကို "cydia.hackulo.us" (သို့ ) "sinfuliphonerepo.com" တစ်ခုခု ကနေသွင်းထားပြီး Error တက်လာပြီ ဆိုကြပါစို့**
i) Cydia --> Manage --> Sources --> Edit --> Delete sign ပေါ်လာလျှင် Installous သွင်းထားသော အထက်ပါ Source တစ်ခုခုကို ဖျက်ပြစ်လိုက်ပါ..
ii) iPhone ကို Reboot လုပ်ပေးလိုက်ပါ။
i) Cydia --> Manage --> Sources --> Edit --> Add မှာ cydia.hackulo.us ကိုပြန်ပြီး source မှာ ပြန်ရိုက်ထည့်ပေးလိုက်ပါ..
ii) Cydia --> Search ထဲကနေ Installous ကိုရိုက်ရှာပြီး ပြန် Install လုပ်ပေးပါ
မှတ်ချက်။ ။ Installous3ကို မရွေးပါနဲ့ 
Install လုပ်ပြီးပါက "Installous App" ကို မဖွင့်သေးပဲ iPhone ကို Reboot အနည်းဆုံး (3)ကြိမ် ဖွင့်လိုက် ပိတ်လိုက် လုပ်ပေးပါ Reboot တစ်ခါနှင့် တစ်ခါကြားတွင် ၁၀ စက္ကန့် ခြားစီ စောင့်ပြီးမှ လုပ်ပါ။
i) Installous App ကိုဖွင့်ပါ အောက်ပါပုံအတိုင်း Caching... ဆိုပြီးပေါ်လာရပါမယ် ပြီးရင် Settings ကိုသွားပါ...
ii) Settings ထဲမှာ Install automatically ကို "ON" ပေးလိုက်ပါ
** နှစ်သက်ရာ App ကို Download ဆွဲနိုင်ပါပြီ "ipa Error" မလာတော့ပါဘူး Applications နှစ်ခု သုံးခုလောက် ဆွဲပြီးရင် "Install automatically" ကို ပြန် "OFF" ချင် Off ထားလို့ ရပါပြီ... **
အားလုံး အဆင်ပြေချောမွေ့ ကြပါစေဗျား....
iTunes Error 1015 ဖြေရှင်းနည်း
iPhone ရဲ့Firmware ကို Downgrade,Upgrade ပဲဖြစ်ဖြစ် တစ်ခုခုမတော်တစ်ဆ ဖြစ်ခဲ့ရင် iTunes error တစ်မျိုးမဟုတ် တစ်မျိုး ပေါ်လာတတ်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်ထံ စာရေးသားဆက်သွယ်လာသူ တစ်ဦးဆိုရင် Firmware ကို ရိုးရိုး update လုပ်တာပါပဲ ဒါပေမယ့် ဖြစ်ချင်တော့ update လုပ်နေစဉ် လိုင်းပျက်ကျသွားလို့Restore ပြန်လုပ်တဲ့ အခါမှာ iTune error 1015 ဆိုပြီးတတ်လာပြီး ဘာမှဆက်လုပ်လို့ မရတော့ဘူးလို့ပြောပါတယ်။
ဘာကြောင့်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် iTune error 1015 ကိုဖြေရှင်းဖို့အောက်ပါ နည်းလမ်းလေးကို ရှာဖွေတင်ပြလိုက်ပါတယ်..
iTune error 1015 ကို ဖြေရှင်းရန် အတွက် လိုအပ်သော Software များကို အောက်တွင် အရင် Download ရယူပါ..
(i) 32Bit (Win)
(ii) 64Bit (Win)
2> Error 1015 Fixer
၁) ပထမဦးစွာ LibUSB download လုပ်ပြီး Install အရင်လုပ်ပါ.. အောက်ပါပုံအတိုင်း ပေါ်လာသော Pop-up ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း တစ်ဆင့်စီ ဆောင်ရွက်သွားပါ။
၂) Error 1015 Fixer ကို download လုပ်ပါ။
၃) iTune ကိုဖွင့်လိုက်ပါ error တက်လာပါက Error 1015 Fixer ကို Run လိုက်ပါ အောက်ပါပုံအတိုင်းတွေ့မြင်ရပြီး "Fix My Error!" ကို နှိပ်ပေးလိုက်ပါ.. ဒါဆိုရင် error 1015 ကိုဖြေရှင်းပေးနိုင်ပါပြီ..
iPhone 3Gs ကစပြီး Apple ရဲ့Device တွေကို Stock (သို့ ) Custom firmware တွေကို Restore လုပ်ရာတွင် Apple က SHSH Blobs (Signature HaSH) ကို သုံးပြီး Verified လုပ်ပြီးမှ firmware ကို install လုပ်ခွင့်ပေးပါတယ်။ အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့် SHSH Blobs ကို သင့် Device အတွက် iTunes upgrade တံခါးတွေဖွင့်တဲ့ သော့တစ်ချောင်း အနေနဲ့ သာ သဘောပေါက် စေချင်ပါတယ်။
ဒီလို upgrade/downgrade တွေ အတွက် သော့ မှားဖွင့်မိတဲ့ အခါမှာ iTunes က verified မဖြစ်ပဲ ကျလာတဲ့ message ကတော့ "The ... could not be restored. An unknown error occurred (3194)" ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ ဒီကိစ္စကို ဖြေရှင်းဖို့ ဆိုရင်...
Tiny Umbrella က ကူညီနိုင်မှာပါ...
Download Tiny Umbrella (Official Site)
၁) Tiny Umbrella ကို စတင်လိုက်ပါ။
၂) "Advance" Tab ကိုသွားပါ။
၃) "Set Hosts to Cydia on exit" စာတန်းပါတဲ့ Box လေးကို UNTICK (အမှန်ခြစ်ဖြုတ်ပါ)။
၄) အမှန်ဖြစ် ဖြုတ်ပြီးပြီ ဆိုပါက အောက်ဆုံးနားရှိ " Apply Changes " ဆိုတဲ့ button လေးကို နှိပ်ပါ။
၅) ပြီးရင် Tiny Umbrella ကိုပိတ်ပြီး နောက်တစ်ကြိမ် သင့် Device ကို "Restore" ပြန်လုပ်ပါ။
အကယ်၍ Tiny Umbrella ကိုမသုံးပဲ ဒီပြဿနာကို ဖြေရှင်းချင်ရင်တော့ "host" file ကို ပြန်ပြင်ရပါလိမ့်မယ်၊ "host" file မှာပါတဲ့ gs.apple.com. ကိုညွှန်းသော စာကြောင်းတိုင်းကို ဖျက်ပစ်ပါ ပြီးရင် "Save" ပါ။
Host file လမ်းကြောင်း ကတော့
စာရေးသူ - ကြေးစားလေး at 6:07 PM No comments:
iPhone, iPod ကို Sync လုပ်နေစဉ် iTunes မှ "An unknown error occurred (13019)" တက်လာခဲ့ရင် အနီးစပ်ဆုံး ဖြေရှင်းချက် အနေနဲ့ကတော့ မိမိ iPhone (သို့ ) iPod ထဲမှာ သွင်းယူထားသော Voice memo များရှိ နေခဲ့ရင် ဖျပ်ပစ်ပြီးမှ iTunes နဲ့ပြန် Sync လုပ်ပေးပါ။
အကယ်၍ မဖျက်ပစ်ချင်ကြဘူး ဆိုရင်တော့ Device နှင့် iTunes ချိပ်ပြီး စတင် Sync လုပ်နေချိန်တွင် Side ဆွဲပြီး Cancel လုပ်ပေးပါ။
ထိုနောက် iTunes တွင် မိမိ Device ကို Select ရွေးပြီး "Music" Tab ကိုသွားပြီး "Sync Music" ကို un_check အမှန်ဖြစ်ဖြုတ်ပြီးမှ Sync လုပ်ပေးလိုက်ပါ။
Sync လုပ်တာ အောင်မြင်သွားပြီ ဆိုမှ "Sync Music" ကို ပြန်ရွေးပေးလိုက်ပြီး နောက်တစ်ကြိမ် Sync ပြန်လုပ်ပေးလိုက်ပါ။
ဤနည်းလမ်းဖြင့် အချို့ လူတော်တော်များများ Error 13019 ကို ဖြတ်ကျော်သွားနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။
iTunes Error 16xx (1600, 1601, 1602, 1603, 1604) & 21
IPSW Restore ပြန်လုပ်တဲ့အချိန် (အထူးသဖြင့် 4.3.3 IPSW) မှာ ဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့ error လေးပါ။
ဒီ error က DFU mode ဝင်လိုက်ရင် ဖြေရှင်းပြီးသား ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။
DFU Mode အတွက် အောက်တွင် နည်းလမ်း နှစ်သွယ် တင်ပြပေးထားပါတယ်...
DFU Mode (Manual)
၁) iDevice ကို PC နှင့် ချိပ်ဆက်ထားပြီး Power OFF ပါ။
၂) Home + Power button ကို ၁၀ စက္ကန့် နှိပ်ပေးပါ။
၃) ၁၀ စက္ကန့် ခန့်နှိပ်ပြီးနောက် Power button ကို လွှတ်ပါ။ Home button ကိုတော့ iTunes က detect သိသည်ထိ နှိပ်ပေးထားပါ။
၄) iTunes မှ Shift + Restore နှိပ်ပြီး Firmware ကို Restore ပြန်လုပ်ပါ။
DFU mode ဝင်ရန် အထောက်ကူပြု အဖြစ် iREB software ကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်...
၁) Download iREB (Win)
၂) iREB ကို Run လိုက်ပြီး မိမိ iDevice အမျိုးအစားကို ရွေးလိုက်ပါ။
၃) DFU mode ဝင်ရန် ညွှန်ကြားချက် အတိုင်း ဆောင်ရွက်ပါ။
အထက်ပါနည်းများနှင့် Error 16xx (1600, 1601, 1602, 1603, 1604) & 21 တို့ ကို ဖြေရှင်းနိုင်ပါလိမ့်မည်..
စာရေးသူ - ကြေးစားလေး at 6:06 PM 1 comment:
iTunes Error 1013,1014 & 1015
iTunes error 1013 သည် iOS 4.2.1 နှင့် iOS 4.3.3 တို့ ကို Update လုပ်သော အချိန်များတွင် ဖြစ်ပေါ်လေ့ ရှိသော Error များဖြစ်သည်။
ယင်း error များကို ဖြေရှင်းရန် နည်းလမ်း နှစ်သွယ်ဖြင့် တင်ပြပေးထားပါသည်။
Host file ကို ပြင်ဆင်ခြင်း
၁) My Computer -> Local Disk (C:) -> Windows -> System32 -> drivers -> etc -> hosts ကိုသွားပါ။
၂) "hosts" ကို Right click ထောက်ပြီး Copy ကူးယူပြီး Desktop တွင် Paste လိုက်ပါ။
၃) Desktop ရှိ "hosts" file ကို Note pad နှင့်ဖွင့်ပါ။
၄) "gs.apple.com" ပါရှိသော စာကြောင်းတိုင်းကို Delete လုပ်ပြီး Save ပါ။
၅) ယင်း Save ပြီးသော Desktop ရှိ "hosts" file ကို Copy ကူးပြီး အဆင့်(၁) တွင် ဖော်ပြထားသော လမ်းကြောင်းအတိုင်း Replace လုပ်ပေးလိုက်ပါ။
၆) Device ကို Restore ပြန်လုပ်ပါ။
၁) Download fixrecovery43 (Win)
၂) iTunes ကို ဖွင့်ထားပါပြီး fixrecovery43.exe ကို Run လိုက်ပါ။ ထို့ နောက် Device ကို DFU mode အောက်ပါ အတိုင်း ပြောင်းပါ။
၃) iDevice ကို Turn Off လုပ်ပါ။
၄) Home + Power button ကို ၁၀စက္ကန့် ခန့် နှိပ်ပါ။
၅) Power button ကို လွှတ်ပြီး Home button ကို fixrecovery43 က iDevice ကို Detect သိသည်ထိ နှိပ်ထားပါ။
၆) fixrecovery43 က Detect သိသွားပါက Screen ပေါ်မှာ ပုံတွင်ပြထားသကဲ့သို့စာတန်းများတက်လာပါလိမ့်မည်။
အထက်ပါ အတိုင်း ဆောင်ရွက်သော်လည်း Recovery mode မှ မထွက်ခဲ့ပါက TinyUmbrella, RecBoot စသည်တို့ ဖြင့် ကြိုးစားနိုင်ပါသေးသည်။
စာရေးသူ - ကြေးစားလေး at 6:06 PM No comments: